Ukufumana kwakhona i-imeyile kwi-Outlook- DataNumen
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Ukufumana kwakhona i-imeyile kwi-Outlook
Ukufumana kwakhona i-imeyile kwi-Outlook
Cima ii-imeyile ngempazamo?
Ngaba ukhuphe izinto kwifolda yakho yezinto ezisusiweyo kungekudala?
Lost ii-imeyile ezingenakufunyanwa kwakhona?
Ngaba iimpazamo ezingaqhelekanga kwifayile ye-PST?
Lost igama lokugqitha lefayile yakho ye-PST?
Iingxaki zokubuyisa i-imeyile?
DataNumen Outlook Repair ilungisa ngokulula yonke le nto nangaphezulu.
Ukufumana i-imeyile yesiqhelo esusiweyo kwi-Outlook ilula. Xa iqhosha lokucofa licofa, i-imeyile ibekwe kwifolda yezinto ezikhutshiweyo. Ukuya kwifolda kuvumela ukuba i-imeyile ifundwe ngokupheleleyo, kwaye inokuhanjiswa ngokulula iye kwifolda eyahlukileyo.
Ukuba, nangona kunjalo, ifolda yezinto ezikhutshwayo ikhutshiwe, okanye ukuba into iyacinywa nge-Ctrl-Delete (yintoni iMicrosoft ekubhekiswa kuyo njengokususa okunzima), i-imeyile iyasuswa kwi-Outlook ngokusisigxina. Ukubuyiselwa kwe-imeyile ye-Outlook kuya kuba nzima ngakumbi.
Ngokwenkxaso kaMicrosoft, “… ukuba awuhambisi izinto kwifolda yezinto ezisusiweyo ngaphambi kokuba uzicime, ezi zinto zicinyiwe kunzima, kwaye awunakho ukuzibuyisa kwifolda yezinto ezisusiweyo.”
Olona hlobo kuphela lokungasusi i-imeyile enjalo kukusebenzisa DataNumen Outlook Repair -Ukwenza umsebenzi okhawulezayo nelula wokusombulula ingxaki.
Isebenza nge-Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 no-2019.
Ukubuyisa ngokupheleleyo imiyalezo ye-imeyile, iifolda, ipheosts, ukuqeshwa, izicelo zentlanganiso, abafowunelwa, uluhlu lokuhambisa, imisebenzi, iimemo, iijenali, amanqaku kunye nokunye.
Ngaba ungashenxisi yonke i-imeyile kwi-Outlook- nokuba ngumbhalo ocacileyo, i-RTF okanye ifomathi ye-HTML.
Ukuncamatheliswa kweposi ye-Outlook kufunyenwe ngokupheleleyo.
Izinto ezifakiwe zifunyenwe ngokupheleleyo.
Inkxaso yeefayile ze-PST ngaphezulu kwe-2 GB ngobukhulu kunye nokwahlulahlula iifayile ze-PST ukuba ziyafuneka.
Inkxaso yokuvelisa iifayile ze-PST kwi-Outlook 97-2002 kunye nefomathi ye-Outlook 2003-2010.
Ukulungiswa kweqela kuxhaswe.
Akukho lwazi lobuchwephesha olufunekayo.
DataNumen Access Repair 3.8 ikhutshwa nge-23 kaFebruwari, 2021
DataNumen Exchange Recovery 8.5 ikhutshwa nge-28 kaJanuwari, 2021